XOG: Sheekh Shariif oo Bari imaanaya Muqdisho & Xasan sheekh oo isbaaro Siyaasadeed u dhigtay… | Kismaayo24 News Agency
XOG: Sheekh Shariif oo Bari imaanaya Muqdisho & Xasan sheekh oo isbaaro Siyaasadeed u dhigtay…
Wednesday September 21, 2016 - 12:02 under Somali News by Tifaftiraha K24
Sida aan kasoo xiganay xubno aad ugu dhaw M/weynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif ayaa maalinta barito ah kusoo wajahan magaalada Muqdisho waxaana isbaaro siyaasadeed u dhigay M/weynaha hada waqtigiisa dhamaaday ee Xasan sheekh.
Sida aan xogta ku helnay Xubno katirsan Kooxda Aala Sheekh ayaa noo sheegay in Dowlada Soomaaliya ay diiday warqada ogolaanshiyaha in shacabka magaalada Muqdisho ay si weyn usoo dhaweeyaan Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, waxaana taa badalkeeda la ogolaaday in tiro yar kaliya ay soo dhaweeyaan Sheekh Shariif.
Warqada looga dalbanayo ogolaansho in si balaaran Sheekh Shariif loogu soo dhaweeyo Magaalada Muqdisho ayaa loo geeyay Wasaarada Amniga, waxa ayna Wasaarada ku wargalisay dadkii warqadasai u geeyay in ay u tagaan Madaxweyne Xasan kana soo codsadaan fasaxa, taa oo u muuqatay xujo adag.
Dowlada ayaana sida aan wararka ku helnay ku andacootay in xaalada amni ee xiligan aysan suurto gal ka dhigeyn in banaanbax lagu soo dhaweenayo Sheekh Shariif muqdisho lagu qabto sidoo kale dad badan oo taageersan ay jidadka u istaagaan soo dhaweyntiisa.
Sheekh Sariif Sheekh Axmed Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa taageero badan ku dhax leh bulshada Soomaaliyeed, waxa uuna kamid yahay Xubnaha loo saadaalinayo in ay ku guuleesan karaan doorashada Madaxweynaha Soomaaliya hadii uu shaaciyo in uu tartamayo.